Umhla My Pet » Yintoni Wonke umntu Kuphephe phezu Umhla First
ukubuyekezwa: Mar. 30 2020 | 4 min ukufunda
imihla yokuqala kunokukwenza ungakhululeki kokubini amadoda nabafazi, ingakumbi xa kuziwa kwi ukwenza ngaloo ndlela ezilungileyo kuqala. Nangona uninzi kusenokwenzeka ukuba umhla wakho wokuqala uya kuhamba ngaphandle koqiniso, kukho ezinye izinto wonke umntu kufuneka bakuphephe xa uthatha umfazi ngenxa ngomhla wokuqala.
Musa Kuze Bonisa Up emva kwexesha
Wokubamba kuba ngomhla wokuqala umele uzi-. Ukubonisa ukuba umhla wakho emva kwexesha uya umhla wakho ingcamango ephosakeleyo. Kusenokwenzeka basenokucinga ukuba usoloko olucothayo, ukuba andikhathali ngokwaneleyo ukuba ukubonisa phezulu ngexesha, okanye, ude ufike, inokucinga ukuba sele wema. Nangeyiphi ndlela, ubotshelelwe ukuba wakhe equmbe esisifu ukuze inqaku iviniga ekuqaleni kumhla wakho. Ukuba ukubonisa emva kwexesha ngenxa imikhosi ezingaphaya kolawulo lwakho, qinisekisa ukuba kubiza umhla wakho ukuba ukwazi okanye, Ukuba ubani kuni ayinalo cell phone, kubiza Restaurant okanye intlanganiso indawo ukuze mxelele ukuba.
Musa Bonisa Up Disheveled kwaye Dirty
Kubalulekile ukuba uzinike ixesha elaneleyo phambi komhla ukuba unuke kwaye khangela konke. Ukuba ukubonisa ukuya kumhla ejonge shaggy kuqala, unkept, enuka funky, Umhla wakho uya kucinga ephosakeleyo ngawe. Umhla wakho ucinga ukhangela le ndlela lonke ixesha yaye ngoko nangoko mayicinywe. Zinike ixesha elaneleyo kuhlambela, achebe, yaye be ayina iingubo zakho. Ukuba isiqingatha extra seyure ingaba ixesha kufuneka uzinike ngohlangothi enomtsalane umhla wakho sele befuna, kwaye khumbula, ungabinayo ixesha okuhlamba kuba ngomhla kunokuzichaphazela ngokunzulu isiphumo yayo. Indoda enxiba kakuhle engazihlambanga kakuhle uya kuphumelela ngokokuhamba slob stinky lonke ixesha.
Musa Khangela Out Okunye Women phambi kwakhe
Xa usiya ngomhla umfazi, nimeneza ngokwakho kuye ngethuba ngomhla. Ngenxa yale nto, kokuba ngokupheleleyo ngaphandle komgca ukuba bazingenele nabanye abafazi xa wena ngomhla. Oku krwada oko yaye akwamkelekanga. Rhoqo ukuphazanyiswa omnye umfazi nihamba mhlawumbi uya kwenza umhla wakho bengakhuselekanga yaye ngokuqinisekileyo akafuni kumnika bacinge ukuba unomdla kuyo. Ukuba usoloko ukundikroba yakhe kwi-blonde ashushu etafileni elandelayo, enye yezinto ezimbini ziyasebenzisana ziqinisekisiwe ukuba kwenzeka: 1) Umhla wakho uya kuziva kakubi kakhulu ngaye, ucinga yena Andimthandi okanye engafunwayo, okanye 2) Umhla wakho uya nomsindo kakhulu kwaye ucatshukiswe nawe, ukwenza ngembi ikhaya drive kwaye ithuba ndawunciphisa umhla wesibini.
Musa lawula incoko
Xa ngomhla wokuqala, usenokuvakalelwa imfuneko ukubonisa intombazana yakho amabali kunye zisukuzana umdla ngawe. Intle kakhulu, kodwa musa ukuzibaxa. Khumbula incoko phakathi kwabantu ababini, akukho mntu uthetha kwesinye. Kubalulekile kakhulu ukuba ukwabelana amabali umdla neengcinga umhla wakho, kodwa qiniseka ukuba ibinguwe ixesha ngokwaneleyo ukuze bathathe inxaxheba ngokulinganayo inxaxheba kwincoko. Buza imibuzo malunga naye, oku kuya kubonisa ukuba unomdla ngaye njengomntu kwaye ndiya kukunika ithuba ukufunda okungakumbi ngaye.
Musa Khwina kwaye izikhalazo
Ewe, sonke sikhe iintsuku zethu ezimbi, kodwa umhla (ngokukodwa umhla wokuqala) asiyiyo indawo ukuvakalisa zonke izikhalazo zakho. amathuba, umhla yakho ilindele ukuba kulungile, ixesha mnandi xa edibana nawe. Ukuba ngaba ukubuliswa 'yendlela nkosi waye onjalo painÖI kuyithiya le townî uya ngoko nangoko mayicinywe. Ukhalazela iiseti ilizwi e noxinzelelo, umhla ungonwabanga. Nokuba ube ngosuku abiwe, musa ukuchitha ubusuku ukukhalaza ngayo. kuba nje kukuvuyela kuchitha ixesha nomfazi ukuba unomdla. Uncumo na esosulelayo kodwa ngokunjalo frowns. Enoba bayakwazi okanye hayi, imo yakho embi inokubeka umhla yakho nendlela avakalelwa ngayo kuwe. Ufuna umhla wakho ukuba ukukhumbula njengoko funny kwaye yimincili, akukho Downer.
Musa Yiba Too Physically enohlaselo
Kubaluleke kakhulu ukuba lifunda imiqondiso umhla wakho phambi kokuya ngenxa ngokumanga (okanye ngaphezulu). Musa ngokuzenzekelayo ukucinga ukuba ngenxa nje ube umhla olungileyo umhla yakho ilungele ukuthabatha ulwalamano lwakho emzimbeni ukuya kwinqanaba elilandelayo. Ukuba unomdla ukuzanga umhla wakho, ziqala nge uphethe, ihagi, ngokucotha ukwakha ukuya ngokumanga. Bawahloniphe iminqweno umhla wakho. Ukuba uthi hayi nayiphi phambili emzimbeni, uthabathe impendulo yakhe ixabiso ebusweni bakuyeke. Indoda uhlasela kakhulu xa kuziwa obusondeleyo ungalucima umfazi off yaye okunene ukwenza umfazi ukoyika okanye exhalabile.
Musa mxelele Uya Mbize Ukuba awufuni
Ukuxelela umfazi 'Ndiza kubiza youî xa awufuni ukwenza oko kuyingozi. Ukuba mfazi abanomdla ngomhla wesibini nawe, ukudana kwakhe kuya mkhulu kuphela ukuba andilinde ngeenxa wakho umnxeba kuphela ufunde ukuba akazange ayeneenjongo elibiza umhla wesibini. Ukuba awufuni ukuba bangambizi, kuphela nje umhla ngokuthi 'Kube intlanganiso nilunge okanye elula' bye Good, aphumle ezintle le eveningî. Le ndlela na beyiqhuba kuye okanye ukuba nolindelo zakhe. On inqaku reverse, Ukuba awufuni ukuba amalungiselelo umhla wesibini, qinisekisa ukuba mxelele ukuba.
Ukucwangcisela nemihla wokuqala ziba-wracking, kodwa ngokulandela imigaqo elula ngelixa ngomhla kuya kunceda ukuqinisekisa ukuba umhla kangangoko kunokwenzeka. Ukuba ndamkelekile, ngexesha, nentlonelo, kwaye ingqalelo, amathuba wena nomhla wakho uya kuba nexesha enkulu, ukuba akutsalwa okunokuzuzwa, Umhla wakho wokuqala onokuba sisiqalo ulwalamano oluhle.